Shidaalkii Yemen ee la joojiyey 9 Feb 9, 2013 - 1:14:26 AM
24 Jan, 2013 Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Puntland sumadeeduna ahayd MW/DPL/BOS/49/2013 laguna socodsiiyey Wasaaraddaha Maaliyada, Dekedaha & Amniga ayaa lagu mamnuucay Shidaalkii Puntland uga iman jiray Dalka Yaman.
29 Jan, 2013 waxaa lagu dhaqan geliyey wareegtada Madaxweynaha qoraal ay si wada jir ah u soo saareen Wasiiradda Maaliyadda & Dekedaha kuwaas oo ku wargeliyey Dhamaan Waaxyaha Wasaaradahaas & Taliska Ciidanka Booliska in la dhaqan geliyo Wareegtada Madaxweynaha aana la keeni karin shidaalkii ka iman jiray Dalka Yemen laga bilaabo 5 Feb, 2013 .
Shidaalka uga iman jiray Dalka Yemen Puntland ayaa bilaabmay kadib markii wadankaas ay ka bilaabmeen kacdoonkii rabshadaha watay ee looga soo horjeeday Xukuumadii Madaxweynihii hore ee Wadankaas Cali Cabdale Saalax.
Yemen oo ka mid ah meelaha aduunka ugu musuqmaasuqa badan ayna ka dhacayeen rabshadoo ayaa u suurtagelisay Koox Ganacsato ah & Saraakiil ka tirsan laamaha Dowladu inay musuq maasuq ku sameeyaan Shidaalkii loogu talo galay in lagu isticmaalo gudaha wadankaas.
Shidaalkaas oo ahaa mid qiimo jaban lagaga soo iibsan jiray Gudaha Wadanka Yemen waxaa la bilaabay in loo soo dhoofiyo Dalka Soomaaliya, fursadaas musuq maasuq oo u saamaxday dhinacyadii ku lugta lahaa inay si weyn uga macaashaan.
Dhibaatada uu keenay Shidaalkani.
Markii uu soo galay suuqyada Soomaaliya shidaalkani wuxuu qiimo jab u geystay Shidaaladii kale ee suuqa yaalay kuwaas oo si sharci ah looga soo iibsaday Wadamada Carabta kuna fadhiyey qiime ka qaalisan taas oo keentay in Ganacsato badani ay fooda daraan khasaarooyin baaxad leh.
Dhibaatada ugu weyn ee shidaalkani keenay ayaa noqotay isagoo aan ahayn mid saafi ah wuxuuna u geystay dhibaatooyin Aaladihii loo isticmaalay & isagoo meesha ka saaray isu dheeli tirkii guud ahaan Ganacsiga.
Meelaha markiiba Shidaalkani xooga ku qabsaday waxaa ka mid ahaa suuqyada Soomaaliland taas sababtay ugu danbayntii In Xukuumadu go’aan ku gaarto in la mamnuucay shidaalkaas aana la keeni karin Deegaanada Somalilanad kadib markii ay badatay dhibaatooyinkiisa & cabashooyinka joogtada ahaa ee ka imanayey qaybaha Bulshada & Ganacsatada.
“Somaliland Shidaalkan waxay joojisay sanad ka hor wuxuuna u geystay suuqyada Somaliland dhibaatooyin nooc walba leh kadib cabashooyin badan oo ka soo yeeray shacabka ayaa Xukuumadu go’aansatay inay joojiso mudadaas wixii ka danbeeyeyna xoogiisu wuxuu aadi jiray sida igu maqaalada ah dhanka Puntland” Ayuu yiri Gudoomiyaha Ganacsatada Somaliland ee Wadanka Imaaradka Yuusuf Haybe oo aan arrintan wax ka weydiiyey.
Dhibaatooyinka uu u geystay Ganacsigii Puntland.
Mudadii uu shidaalkani ka shaqaynayey Deeganada Puntland wuxuu u geystay dhibaatooyin baaxad leh oo dhanka dhaqaalaha ah sida ay kuu sheegayaan Ganacsatadu.
Puntland Ganacsigeedu wuxuu ku xiran yahay Wadanka Imaaradka Carabta oo looga keeno badi badeecooyinka waxaana ka soo waarida Doonyo kuwaas oo fure u ah dhaqalaaha Dalka.
Waxyaabaha ay qaadi jireen Doonyahu waxaa ka mid ahaa Shidaalka taas oo saamixi jirtay in dooni kastaa si fudud u raranto hase yeeshee markii uu ka joogsaday dhanka Imaraadka Carabtu shidaalkii waxay kaliftay inay ku qaadato Dooni kasta mudo ka badan 1 bil & dheeraad inay rara sugto.
“ Shidaalkaasi markii uu ka furmay dhanka Yemen Ganacsigii & isu socodkii Gaadiidka ee dhanka Imaaradka & Puntland waxaa soo gaaray dhaawac weyn oo kaliftay in aanu weyno Rusum taasina waxay keentay in 70% ay hoos u dhacaan doonyihii aadi jiray Boosaaso uuna saray u kaco nooligii waxaana dhacday marar badan inuu kala go’o ku yimi badeecooyinkii daruuriga ahaa taas oo taabatay nolosha shacabka” Ayuu yiri Gacansade Axmed Cabdirizaaq oo aan maanta kula kulmay Dekeda Liyo ee Magaalada Shaariqa.
Wuxuu cadeeyey intii shidaalkaasi ka furmay dhanka Yemen in uu yaraaday dhaqdhaqaaqii Dekeda Boosaaso .
Waa maxay Rusum.
Ganacsatadu waxay ku doodayaan in hoos u dhaca ku yimi dhaq dhaqaaqii Dekeda Boosaaso & isu socdkii gaadiidka ee Dalka Imaraadaka Carabta & Puntland ay sabab u tahay kadib markii doonyihii loo waayey Rusum la saaro.
Rusumka ayey ku sheegeen inuu yahay culays ay doontu u baahan tahay in loo dhigo khanan ka hoose boosaskaas oo lagu buuxin jiray Shidaalka halka khananka sare & kuwa dhexena la saari jiray Gaadiidka & Badeecooyinka daruuriga ah.
Waxay sheegeen Ganacsatdu in markii la waayey Rusunkaas ay korortay qiimaha kiradu ayna hoos u dhaceen isu socdkii Gaadiidka ee labada dhinac iyagoo sheegay in badi doonyihii ka diideen inay u safraan dhanka Boosaaso maadama hadii aan Doonta loo helin Rusum culus oo hoosta loo dhigo uu lumayo isu dheeli tirkii taasna ay sababi karto doontu inay si sahal ah u degto.
Intii uu soo baxay amarka Dowladu ku mamnuucday Shidaalkii Yemen waxaa laga dareemayey Dekedaha Imaaradka camirnaan iyadoo ay soo buux dhaafiyeen doonyo fara badan & badeecooyin kala duwan waxaana maanta si habsami ah u socotay raritaanka doonyaha talaabadaas oo lagu tilmaamay mid kor u qaadaysa Ganacsigii & dhaq dhaqaaqii suuqyada Puntland oo beryahan hoos u dhacayey.
“Hada waxaan maqlay in Puntland mamnuucday Shidaalkaas waana talaabo aanu ku faraxsanahay durbana waxaa laga dareemay suuqa saaka ilaa shalay waxaa soo buux dhaafiyey badeecooyin fara badan doonyihiina hada waxaa lagu shubayaa shidaalkii” Ayuu sii raaciyey Ganacsade Axmed Cabdirizaaq oo rajaynayey in suuqu sidii hore ku soo laabto.
Yaa Shidaal ka soo dhoofsan kara Imaaradka.
Ganacsade kasta oo haysta miisaaniyad balaaran & mid kasta oo awoodiisa dhaqaale xadidan tahay waxay si isku mid ah awood ugu leeyihiin inay wadanka Imaaradka ka soo iibsadaan Shidaalka iyagoo ku helaya qiime isku mid ah waana suuq furan oo aan u xirnayn dad gaar ah xataa hadii awoodaada dhaqaale aysan dhaafsiis nayn inaad ka Ganacsato 20 fuusto wax ka badan.
“Suuqu waa mid furan Shidaalka anagaa dulaalna oo isku xirna Ganacsatada u baahan & kuwa haya cidkasta oo doonaysa inay ka ganacsatona waa u furan yahay hada waxaa la isoo diray dalab kala gedisan oo kan ugu yari yahay 30 fuusto kan ugu badnina yahay 200 oo fuusto” Ayuu yiri Cabdi Maxamuud oo ka mid ah ganacsatada dulaala Shidaalka.
Khatar dhanka Amaanka ah.
Doonyaha shidaalka ka keeni jiray dhanka Yemen waxay sababi kareen khatar dhanka amaanka ah taas oo ahayd wel wel meesha ku jiray maadaama ay Deegaanada Puntland ku soo qulquleen Maleeshiyaadka Al-shabaab ee xiriirka dhow la leh Al-qaacidada ka Dagaalanta Dalka Yemen waxayna uga faa’iidaysan kareen doonyahaas inay ku soo raraan Hub ama ay u istimaalaan isu socdka si ay isaga talaabaan labada Dal maadaama ay dhanka Yemen si dhuumaalaysi ah uga soo baxaan halka dhanka Puntland ay fududahay inay tagaan Xeebaha ka baxsan Dekeda Boosaaso.
Wareegtada Madaxweyne Cabdiraxmaan Sh. Maxamed Maxamuud (Faroole) ayaa lagu sheegay in Shidaalkani dhaawac weyn u geystay Ganacsigii Puntland ayna soo badatay cabashooyinka ka imanaya qaybaha Bulshada & Ganacsatadu go’aankaas oo Ganacsatada & Dadka faaleeya Arrimaha Ganacsiga Puntland si weyn u soo dhoweeyeen kuna tilmaameen mid wax badan ka bedeli kara Ganacsiga Puntland oo waayadii u danbeeyey laga dareemayey hoos u dhac .
Qoraa & Faaloode madax banaan